Mushrooms - kungcono ngempela amakhowe Russian. Entshonalanga, naseningizimu nasempumalanga umsoco ngisho nokuwabona. Ezweni lethu, baba yingxenye yohlaka ukwazi wabantu kunawo amahlathi kanye kuxazululwe phezu amatafula. Kwezinye izingxenye yingxenye European yeRussia, eSiberia ubisi mushroom sekuyisikhathi eside omunye ukhunta zezimboni olulodwa. Good izinga ukudla nge fruiting obuningi nkomoni - lena imfihlo ukuthandwa kwakhe kazwelonke.
Injongo eyinhloko Gruzdev - yebo, salting. Zonke ezinye ukudla emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu (kufaka amakhowe abadumile ukhilimu omuncu) kufanele uzilungiselele kusuka nosawoti izimali kakade. Ezinye izindlela ukupheka, ezifana ukosa fast, Kunconywa ukuthi zazivelaphi German - kungcono nje ukuhunyushwa umkhiqizo.
Kulesi sihloko sibheka izinhlobo ubisi amakhowe, kanye ukuthola iyiphi kuwo kungaba ngaphandle kokwesaba yokudla.
Lezi zinhlobo ubisi amakhowe ezikhulayo Urals kanye iVolga esifundeni, lapho abizwa kanjalo ngenxa izigqoko zabo kancane ebusweni mucosal. Kulokhu bebizwa eSiberia pravskimi (iqiniso).
Lezi zinhlobo ubisi amakhowe atholakala kusukela ekuqaleni kuka-July kuya ku-October obuningi, Nokho akuvamile, ikakhulukazi enyakatho-asentshonalanga nasenyakatho izifunda of Russia, e-Middle kanye Upper iVolga esifundeni, engxenyeni esenyakatho ye ezimaphakathi of Western eSiberia naseMpumalanga Urals. Zikhula emahlathini okuxubile kanye birch.
Ngo abasha mushroom head ubukhulu 20 cm, kuyinto maphakathi lalihlehliswa noma kakhulu ayisicaba Fluffy onqenqemeni onoboya zihambisana ngaphakathi mucosa kamuva, uphondo okwenyanga, ngokuvamile eyindilinga buthaka emapheshana lwengilazi ngezikhathi namabala ensundu. Plates nombala omhlophe nge onqenqemeni aphuzi mncane. Uma lokhu uginindela kuyinto obukhulu, umbala omhlophe, kodwa ziyaqothuka, it has a acute nezimnandi 'Gruzdev "iphunga. Isiqu kuyinto cylindrical, dlala, nephupho ngaphakathi.
Lezi izinhlobo ubisi amakhowe (ngezithombe ungabona kulesi sihloko) ezidliwayo, eyakho esigabeni sokuqala. Ngesikhathi esifanayo amakhowe okunosawoti babe tinge bluish, namanzi, enamakha, esinamanzi.
Uma sicabangela lokho kukhona amakhowe amakhowe izinhlobo ayikwazi wathi ngakho. Sikhula e okuxubile birch nesihlahla sonwele amahlathi kusuka ngoJuni kuze November, amaqembu kanye ngamunye.
I cap emhlophe, ububanzi 20 cm, kancane aphuzi, oluhlaza ngezinye izikhathi okhanyayo, cishe flat noma imikiswe-convex. I abasha ngabanye Plano-convex ke uba uphondo, nge onqenqemeni enoboya, zihambisana phansi, kanye ezindaweni kancane ebonakalayo zamanzi. Esikhathini lemvula endaweni eshelelayo kakhulu.
Uma lokhu uginindela ziyaqothuka, elimhlophe okuqinile, inike obukhulu obumhlophe esivuthayo juice nokuxhumana emoyeni kuba umthunzi sulphur njengotshani noma ephuzi. Isiqu sifushane, emhlophe, uqweqwe, nqunu, ngezinye izikhathi phakathi yokuvuthwa kuyize. mushroom kunemibandela ezidliwayo.
Lezi zinhlobo ubisi amakhowe zikhule ikakhulu okuxubile birch nesihlahla sonwele amahlathi kusuka ngoJuni kuze Okthoba, ngezinye izikhathi kuba imikhaya ngokwanele ezinkulu. Okwamanje samanje ziyivelakancane.
Cap ubukhulu 20 cm, phakathi kwe-esinamanzi, phakathi, shaggy, ngaphakathi emaphethelweni phakathi, usemanzi, obukhulu, isimo sezulu emanzi lwamafinyila okunamathelayo. Indawo yayo kunjengegolide ophuzi, ne dark, omnene evelele esishintshashintshayo eyindilinga.
Kulokhu, uginindela emhlophe, obukhulu, yellowing we touch, ziyaqothuka, ukukhishwa acrid obukhulu juice ezimhlophe, yellowing emoyeni.
mushroom Ezidliwayo evamile libhekisela esigabeni sokuqala. Isetshenziselwa pickling, pre-sifakwe emanzini emanzini. Kulokhu, ukunambitheka Gruzdev akuyona phansi kunabaphostoli ngempela.
Kwenzeka babeyivakashela ngankathi, akuvamile. Nakuba kwezinye izindawo, isibonelo loMfula Lower iVolga, ngokwanele Poplar luningi ukhule amakhowe. Izinhlobo lezi zitholakala emahlathini poplar e-aspen, ikakhulukazi amaqembu.
usayizi cap ububanzi 20 cm, it is sicindezelwe phakathi, Plano-convex, nge onqenqemeni wagoba, bese iba uphondo-kancane pubescent amakhowe abasha kakhulu, noma uhamba ze, omhlophe, ngezinye izikhathi Pinkish namabala ukukhanya. Ama-platelet I ayilutho pink. Foot awugqinsi, dlala, ezimhlophe noma Pinkish. Inyama olumhlophe nge Milky, juice acrid kakhulu.
Mushroom ezidliwayo, isigaba sesibili. Esikhathini ukudla esetshenziswa okunosawoti kuphela.
Kuyaphawuleka ukuthi eziningi zalezi kungokwalabo le isikhunta engenakudliwa ngobubi bawo ngenxa juice yabo caustic Milky. Kodwa kukhona izinkomba ukuthi kunemibandela amakhowe ezidliwayo kancane eyaziwa. Izinhlobo lezi isikhunta, njengoba singabona, akubona bonke edliwayo, futhi abanye kungenzeka, kodwa ngokucophelela okukhulu. Lactarius isikhumba efanelekayo pickling emva abilayo noma sifakwe emanzini isikhathi eside.
Sikhula e lezihlahla namahlathi coniferous. Ngezinye izikhathi kwenzeka nalapho behlangene bebaningi. mushroom cap ifinyelela ubukhulu 20 cm, olokuqala yayo ifomu ayizindunduma-flat, khona-ke ezimise Elitholakele-, umbala-ke omhlophe ngalesosikhathi it phathelana izindawo ocher noma tint aphuzi. Inyama ezimhlophe, ngokucebile inike ukwa juice simhlophe, okuyinto asishintshi emoyeni.
Lokhu ukhunta is eyaziwa ngokuthi "Chernushka". Wakhe isigqoko esinamanzi, liqinile, flat, okusaluketshezi kancane, ngokuhamba kwesikhathi, kuba abamnyama. Imiphetho Velvety wakhe, ngokucijile aguqe, ilula maphakathi no-cap uqobo.
Phansi umlenze welulela amapuleti: mhlophe, khona-ophuzi (uma ihlukana noma sicindezelwe ke zikhona izindawo ensundu). Kulokhu, umlenze aminyene ngokwanele, ngesikhathi kuba eziyize. Inyama ezimhlophe, indawo, amnyama ekuqa-, inike eziningi esivuthayo juice ezibabayo.
Phatha ngokucophelela okukhulu ukuze isikhunta engaziwa. Ngaphambi kokuba sidle ukudla kwabo, udinga izikhathi 100 ukuhlola kungakhathaliseki ukuthi edliwayo kanye sibalo kanjani ukupheka kubo kahle.